Isitolo esidayisa yonke impahla PP Ukupakisha ibhande extrusion umugqa Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | Qiangsheng
Ukukhiqizwa kwezinto zokusetshenziswa kungasetshenziselwa ukukhiqiza amabhande okupakisha ngezinto ezenziwe kabusha noma ngezinto ezintsha ezihlanganisiwe. Kungenzeka futhi ukwengeza i-calcium carbonate ngokuya ngezimo zamakhasimende ukunciphisa izindleko zokukhiqiza, ukwandisa inzuzo yomkhiqizo, nokuncintisana kwezimakethe.
1. Ukukhiqizwa kwezinto zokusetshenziswa kungasetshenziselwa ukukhiqiza amabhande okupakisha ngezinto ezenziwe kabusha noma ngezinto ezintsha ezihlanganisiwe. Kungenzeka futhi ukwengeza i-calcium carbonate ngokuya ngezimo zamakhasimende ukunciphisa izindleko zokukhiqiza, ukwandisa inzuzo yomkhiqizo, nokuncintisana kwezimakethe.
2. Okukhiphayo kuphezulu, futhi isivinini somugqa esiphelile singafinyelela ku-260m / min.
3. Ukubukeka kwawo wonke umshini kulungiselelwe, kuhle futhi kusezingeni eliphakeme, kuqinile futhi kuqinile.
4. Izingxenye zokunemba okuphezulu kakhulu zenza umkhiqizo wokwenza ikhwalithi uzinze, ububanzi nokushintshashintsha kobukhulu kuncane kakhulu kunezinga likazwelonke; idivaysi eyingqayizivele yokushintsha inethiwekhi inciphisa kakhulu isikhathi sokushintsha kwenethiwekhi.
5. Isikulufu sekhwalithi ephezulu kakhulu, kusetshenziswa uhlobo lomkhiqizo owaziwayo, ukwakheka kwepharamitha okuyingqayizivele, nezinzuzo ze-extrusion enkulu, i-plasticization enhle, ukuqina okuphezulu nokumelana nokugqoka okuphezulu.
6. Lungiselela isinciphisi segiya esikhethekile esiqinile, ukugqoka ngejubane eliphezulu kanye nempilo yesevisi ende.
7. Idizayini eyingqayizivele yedivayisi yokulungisa ukulawula ukuthambekela komkhiqizo.
8. Uhlelo oluhlukile lokushisa i-oven loop, indlela yangaphakathi yokubuyisela emuva, esebenzisa ngokuphelele amandla ashisayo ukunciphisa kakhulu ukulahleka kwamandla.
Inqubo yokwelula eyingqayizivele, ngobulukhuni obuhle nobubanzi obuzinzile.
10. Uhlelo oluhlukile lokupholisa iluphu, amasethi amaningi we-roller roller, okwenza ibhande lipholile futhi linciphe ligcwaliseke ngokwengeziwe, umkhiqizo uzinzile kakhulu futhi nosayizi unembe kakhudlwana.
11. Uhlelo lokudonsa ngama-five-roll, i-traction izinzile, imishini isebenza kahle, izinga lokwehluleka lincishisiwe, futhi izindleko zesondlo zinciphile ngama-60%.
12.Idivayisi ekhethekile yokufaka embossing nokucindezela okuphezulu, ingcindezi eguquguqukayo, i-embossing ecacile nenhle, ikhwalithi yomkhiqizo ethuthukisiwe, efana neYurophu, iMelika, iJapan neSouth Korea.
13. Uhlelo oluqhubekayo lokufaka amandla, imingcele eyingqayizivele yokwakheka, ngokuhambisana nokukhishwa okuphezulu, umphumela omuhle kakhulu we-tape, isigaba esigcwele futhi esihle.
14. Izingxenye zamasondo neshaft zenziwe ngensimbi ephezulu enamandla. Amagiya acutshungulwa nge-carburizing, quenching and grinding, kanti izinga lokwehluleka kwemishini lehliswe ngo-60%.
15. Usebenzisa uhlelo lokulawula uhlelo lwekhompiyutha, idatha yemininingwane ebekiwe yokukhumbula imemori, esebenza kalula, elula ukulungisa iphutha.
Umugqa wokukhiqiza we-PP unamabhande amane, futhi ivolumu yokukhiqiza ezinzile ifinyelela kumathani ayi-5-6 ngosuku! Umugqa wakamuva womkhiqizo we-PP unamabhande ayisithupha, nokuyinto yokuqala embonini.
17. Ongakukhetha akukho-stop othomathikhi kwesikrini Tjhugulula! Khulisa izinzuzo.
Langaphambilini Umugqa we-PVC Cable Trunking Extrusion
Olandelayo: Umugqa we-PVC Foam Board Extrusion Line